Saran-dalana 500 Ariary : Hosaziana ireo fiara mbola ratsy kalitao -
AccueilSongandinaSaran-dalana 500 Ariary : Hosaziana ireo fiara mbola ratsy kalitao
Saran-dalana 500 Ariary : Hosaziana ireo fiara mbola ratsy kalitao
02/10/2018 admintriatra Songandina 0
Raha efa roa volana katroka izay ny ao amin’ny kaoperativa FMA, na fitaterana mendrika ho an’Antananarivo no nampakatra saran-dalana ho 500 , dia roa herinandro kosa ny an’ireo kaoperativa sasantsasany ao amin’ny Uctu no nampakatra ny azy. Misy kosa ireo nitazona ny saran-dalana ho 400 Ariary, saingy tsy misy intsony ny tapa-dalana, toa ny zotra Tselatra. Ny fampakarana saran-dalana dia midika fa mihatsara ny tolotra sy ny kalitao omena ny mpanjifa araka ny lalàna 2014-053, andininy faha-9 mifehy ny fitaterana eto amintsika. Mifanohitra tanteraka amin’io anefa ny zava-misy eto an-drenivohitra amin’izao fotoana izao sy hatramin’izay. Mianakendry ny mampakatra saran-dalana fotsiny mantsy ireo taksibe fa tsy misy akory ny kalitao omena ny mpanjifa. Ny saran-dalana 500 Ariary, fa ny fiara tsy miova mihitsy. Tena mbola mikorontana tanteraka fitaterana, ary tsy misy ny kalitao.
Mbola vodihazo, mbola silana hazokely no ipetrahana ho an’ny seza afovoany, ampidinin’ny resevera raha vola vaventy omen’ny mpanjifa, mihodina an-dalana. Tsy azo odiana tsy hita ny fitondran-tena tsy mendrika ataon’ny mpamily sy ny mpanampy azy. Tafiditra amin’izany ny tsy fanajana mpandeha, ny loto. Fantatra moa fa efa misy ny fanaraha-maso ataon’ny ATT tao anatin’ny roa herinandro nampakarina ny saran-dalana, hijerena ny kalitaon’ ny fiara. Ho an’ireo mbola ratsy ny kalitao, dia hisy ny sazy hihatra araka ny fepetra takian’ny lalàna. “Araka ny lalàna mifehy ny fitaterana dia tsy maintsy manatsara kalitao ireo mampakatra ny saran-dalana. Efa roa herinandro izay, nisy ny fanaraha-maso nataon’ny Att ho an’ireo fiara nampakatra saran-dalana ireo, ka raha mbola ratsy ny kalitao dia hosaziana izy ireo. Sarotra be raha hogiazana avokoa ireo fiara tratra tsy manaraka ny lalàna, fa hosaziana araka ny voafaritra anatin’ny lalàna mifehy ny fitaterana izany, toa ny fisintonana ny “licenc” sy ny maro hafa”, hoy ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny ATT, ny kolonely Reribaky Jeannot.
Ny mahagaga dia mitohy hatrany ny fanampiana omen’ny fitondram-panjakana ireto fitaterana tsy mitsinjo afa-tsy ny vola hiditra am-paosiny ihany.
Ny fanampiana omena fanjakana mantsy dia midika ny fitazonana ny saran-dalana ho 400 Ariary ho fitsinjovana ny vahoaka madinika. Nefa raha mampakatra saran-dalana ve ireo fiara, tsy tokony hiato amin’izay ny fanomezana vola azy ireo. Satria tsy marina velively ny filazan’izy ireo fa matiantoka amin’ny fiakaran’ny vidin’ny solika, izay antony lazain’izy ireo fa nampakarana ny saran-dalana. Raha matiantoka tokoa ireo fitateram-bahoaka dia efa ela nijanona tamin’ity asa ity fa matoa mbola manohy ny asany dia ao raha. Araka ny fanazavana voaray tamin’ny tale jeneralin’ny ATT hatrany anefa dia mitohy foana ny fanampiana ireo fiara fitateram-bahoaka. “Mbola mitohy ny fanampiana ireo taksibe fa atao laharam-pahamehana fotsiny ireo tsy nampakatra saran-dalana. Efa eo am-pandaminana ny fanampiana manaraka mihitsy ny tompon’andraikitra amin’izao fotoana izao ary tsy ela dia hivoaka izany”, hoy hatrany Kolonely Reribaky Jeannot, tale jeneralin’ny ATT.
Nitokona irery teny an-kianja toa ireny zaza tsy nisy mpiahy ireny ireo olona mpomba ireo depiote Mapar omaly. Tsy nipoitra teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai intsony mantsy izy ireo na dia nanome toky aza tamin’ny ...Tohiny